Isampula kunye nexabiso-Xiamen Kinghow Imveliso yangaphandle yeChild Co., Ltd.
Ukuzibophelela kwethu kolwaneliseko lwakho olupheleleyo
Ukuhambisana nolindelo lwakho
Isampulu ethunyelwa kubathengi kufuneka baphile ngokuvisisana nolindelo lwabo njengoko isigqibo sabo siza kuxhomekeka kumgangatho wesampulu. Kwi-OEM xa ubuza isampulu, asishiyi nelitye ukuze siqiniseke ukuba ufumana isampulu ekumgangatho ophezulu eyilwe ngokugqibeleleyo.
Ngokubanzi iindleko zixhomekeke kuhlobo lwelaphu kunye nobugcisa bemveliso. Xa sisebenza kwiprojekthi abayili bethu kunye nabachwephesha bathambekele ekwandiseni zonke iindleko eziza namaxabiso aphantsi kokhuphiswano lwakho kuwe.r umthengi).
Ukuphuculwa kunye neengcebiso
Ngalo lonke ixesha lokuphuhliswa kweprojekthi siqhubeka nokujonga kuluhlu lweengcebiso ukuze sazi ukuba loluphi uphuculo olunokwenziwa kuyilo lwemveliso ukuyenza ibenomdla ngakumbi kwaye ithengiswe.
Eyona nto sigxile kuyo kukwenza imveliso yakho ibe yinzuzo (kuwe) kunye nomgangatho ophezulu (kumthengi).
Sinika abathengi bethu inkululeko epheleleyo yokuchaza iimfuno zabo kunye nokuchaza into abayifunayo xa besiza e-OEM. Emva kweentlanganiso ezimbalwa kuye kwagqitywa kwelokuba iindleko zesampulu ziyafumaneka simahla okanye ziyabuyiswa.
Siyakuqonda ukubaluleka kwesampulu njengoko idlala indima ebalulekileyo ekumiseleni indleko nomgangatho wemveliso. Injongo yethu kukuyila isampulu yentengiso ngokugqibeleleyo ukuze ibekwe njengomgangatho kuyo yonke imveliso. Inxalenye yomsebenzi weqela lethu lobuchwephesha ukwenza uluhlu lwezimvo zobuchwephesha kwiqela lokuvelisa. Sikwabandakanya ukuthengisa kunye namaqela eQC kwintlanganiso yethu yangaphambi kwemveliso ekhokelwa liqela lemveliso kwaye ijolise ekufundeni malunga neenkcukacha zeodolo yakho kunye nokubalula kwayo.
Iingcali zicebisa ngemicimbi yamaxabiso
Awudingi ukuba noloyiko ukuba ufumanisa kunzima ukugcina amaxabiso kwaye unomdla wokufikelela ekujolise kuko.
Kule minyaka, i-OEM iye yakwazi ukwenza iibhegi zokwenza ezizizo zonke iiklasi. Sisoloko sikulungele ukukunceda kwiingxaki zakho zexabiso. Kunye nabayili bethu abanetalente enkulu kunye nabachwephesha kunokwenzeka ukuphonononga ukhetho oluninzi okt amanye amalaphu, izixhobo kunye noyilo lokulawula ixabiso leprojekthi yakho.
Iya kuba sisiqubulo sethu ukukunika imveliso eyanelisa iimfuno zakho.